व्यवसायिक खेलमा नगएसम्म फुटबलको भविष्य अन्योलमा | Janaandolan
Home खेल व्यवसायिक खेलमा नगएसम्म फुटबलको भविष्य अन्योलमा
व्यवसायिक खेलमा नगएसम्म फुटबलको भविष्य अन्योलमा
विर्तामोड नगरपालिका विर्तामोड–१० स्थित सैनिक युथ क्लब पहिलो पटक १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा भएको मुख्यमन्त्री कपको उपाधी उचाल्न सफल भयो । प्रतियोगितामा सोही क्षेत्रका उत्पादन प्रवेश कट्वालले कोच (प्रशिक्षक) को भूमिका निर्वाह गरेका थिए । जिल्लाले आयोजना गरेका प्रतियोगिताहरुको पनि व्यापक चर्चा हुने सन्दर्भमा प्रदेशस्तरकै फुटबल लिगले भने खासै चर्चा पाउन सकेन । यस्तो अवस्थामा पहिलोपटक आयोजित मुख्यमन्त्री लिगको उपाधी हात पारेको सैनिक क्लबका प्रशिक्षक प्रवेश कट्वालसंग जनआन्दोलन डटकमका लागि गरिएको कुराकानी सं.
कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
प्रदेशस्तरिय लिग जितेका छौं । यो जितको श्रेय सबै खेलाडी, सैनिक युथ क्लब र सबै झापाबासीलाई दिन चाहन्छु ।
उपाधि प्राप्त गर्न कसरी सम्भव भयो ?
– जिल्ला लिग च्याम्पियन हुँदा नै खेलको केही फम्र्याट बुझेको थिएँ । त्यही अनुसार जिल्ला लिगको तयारी भएको थियो । त्यसपछि अञ्चलमा खेल्न पाउने भएपछि जिल्ला लिग च्याम्पियनको फम्र्याट अनुसार नै तयारी गरेका थियौं । जिल्लाबाट अञ्चलमा जाँदा मेचीका चार टिमबीच भएको प्रतिष्पर्धामा जिल्लाको भन्दा अझ स्ट्रङ टिम चाहिन्थ्यो,त्यही अनुसार तयारी गर्यौं । त्यसपछि तीन अञ्चल (मेची, कोशी र सगरमाथा) का टप–२, टप–२ बीच धरानमा प्रतिष्पर्धा भयो । यी सबै प्रतिष्पर्धामा होम टिमका खेलाडी साथै अरु बाहिरका खेलाडी नियमानुसार म्यानेज गरेका थियौं । प्रदेशमा प्रथम हुनेले राष्ट्रिय लिग खेल्न पाउने कुरा थाहा थियो । राष्ट्रिय लिग खेल्नका लागि लामो तयारी हुन्छ, त्यो बारे जानकार भएकै कारण लामो प्लानिङ अनुसार नै खेलाडी व्यवस्थापन तथा टिम म्यानेज गरेको थिएँ । अब मुख्य मन्त्री लिगका लागि ६ वटा टिमबीच प्रतिष्पर्धा भएको थियो । प्रदेशमा पुग्दा त्यहाँ सहभागी टिम र उनीहरुको खेल हेरेर रणनीतिक योजना बनाएर खेलेका कारण उपाधी सम्भव भएको हो ।
यही टिमले राष्ट्रिय लिग खेल्छ त अब ?
राष्ट्रिय लिग खेल्नका लागि अझै एउटा खुड्किलो बाँकी नै छ । सातवटा प्रदेशबाट सहभागी ६ वटा टिमले प्रेसिडेन्ट कप खेल्न बाँकी नै छ । सात प्रदेशमा प्रदेश ६ र ७ ले एउटै टिम बनाएर खेल्दैछन् । त्यसमा टप–४ मा पर्ने टिमले राष्ट्रिय लिग खेल्न पाउँछ ।
संभावना कतिको छ ?
संभावना धेरै छ । किन भने अहिले प्रदेश–१ मा हामी च्याम्पियन भएका छौं । अरु प्रदेशमा लिग भएकै छैन । त्यसकारण पनि हाम्रो संभावना धेरै छ । किन भने यदि अरुतिर लिग भएन भने प्रदेश–१ मा फाइनलमा पुग्ने दुवै टिम र सेमिफाइनलका दुई टिमले पनि राष्ट्रिय लिग खेल्न पाउने प्रावधान भएकोले हाम्रो संभावना अधिक छ ।
सैनिक युथ क्लबको कोच हुनुहुन्छ कोच हु“दा र खेलाडी भएर खेल खेल्दाको अनुभव ?
पहिलो कुरा फुुटबलका लागि झापा उर्वरभूमि हो । उर्वरभूमिको कुरा गर्दा सैनिक युथ क्लब जोडिन्छ । यहाँ बाह्रै महिना ट्रेनिङ हुन्छ । फुटबल खेलाडी उत्पादनमा सैनिक धेरै अगाडि छ । यहाँका धेरै अग्रज दाईहरुले नेपालको फुटबलमा नाम बनाइसक्नु भएको छ । त्यो मैले जान्दादेखि खेल्दादेखि र अहिले कोचको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि अगाडि नै छ । खेलाडी उत्पादनमा क्लब आफैंमा राम्रो छ । म आफंै पनि त्यहीको उत्पादन हो । यहाँ बाह्रै महिना अभ्यास हुन्छ । म क्लबको उपाध्यक्ष पनि हुँ, सिनियर खेलाडी भएकोले कोचको जिम्मेवारी पनि दिनुभएको छ । प्रदेश–१ मा लाइसेन्स प्राप्त ३ जना कोचमध्ये म पनि एक हुँ ।
मैदानको व्यवस्थापन कस्तो छ ?
मैदान त एकदमै राम्रो छ । हामीले यस्तो मैदान पाएका छौं, भिरालो÷भिरालो भएकोले चार÷पाँच दिनसम्म निरन्तर पानी परेपनि जम्दैन । ३÷४ घण्टामै बगेर जान्छ । जस्तै बर्षात भएपनि खेल्न पाउँछौं ।
अभ्यास गर्ने मैदानको मापदण्ड ?
अभ्यासका लागि मापदण्ड चाहिंदैन । टुर्नामेन्ट गर्न मात्रै मापदण्डको चाहिने हो । अभ्यासका लागि राम्रो मैदान भए हुन्छ । हाम्रो (होम) टिम सधैं अभ्यासमै छ । खेलाडीका लागि निरन्तरको ट्रेनिङ जरुरी हुन्छ । फुटबलका लागि स्थापित हाम्रो टिमको अभ्यास निरन्तर छ ।
मुख्य मन्त्री लिग होम टिमले मात्रै खेल्यो ?
प्रतिष्पर्धा अनुसार टिम तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पिटिसन कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जिल्लामा खेल्दा दुईजना मात्रै बाहिरका थिए । अरु सबै होम टिमकै खेलाडी थिए । अञ्चलमा त्यसमा केही म्यानेज गरियो । अञ्चलबाट जाँदा अझै कम्पिटिसन टप हुन्छ । कम्पिटिसन टप हुने भएपछि हामीले अझै खेलाडी सेलेक्टेड खेलाडी खेलाउन पाउँने हुँदा अलि स्ट्रङ टिम सहभागी भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री लिगमा त कम्पिटिसन कस्तो हुन्छ, अरु टिमको खेलाडी, प्रतिष्पर्धामा कस्तो टिम आउँछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा हामी सफल भयौं । हारजित भन्दा पनि होम टिमलाई कम्पिटिसनमा सहभागी गराउनु ठूलो कुरा हुन्छ । खेल्न नपाए खेलाडी हतोत्साही हुन्छन्, खेलाडीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि पनि अघिल्ला प्रतिष्पर्धामा होम टिमलाई नै सहभागी गराएको उपज पनि हो उपाधी ।
क्लबको आर्थिक अवस्था ?
नेपालको फुटबलमा आर्थिक कुरा नै जोडिन्छ । जबसम्म क्लबहरु व्यवसायिक खेलतर्फ जाँदैनन् र खेलमार्फत आम्दानी गर्न सक्दैनन् तबसम्म फुटबलको भविष्य अन्योल नै छ । अहिलेसम्म खाली सहयोग र चन्दाबाट मात्र खेल संभव हुँदै आएको छ । र सैनिक पर्यायबाची शब्द जस्तै हो । सैनिक भनेपछि फुटबल र फुटबल भनेपछि सैनिक भनेर चिनिन्छ । त्यो समस्या हामीकहाँ पनि छ । मुख्य मन्त्री लिगमा सहभागी हुँदा पनि विर्तामोड नगरपालिकाका केही वडाध्यक्षले सहयोग गरेका छन् । केही निजी संघसंस्था र व्यक्तिले सहयोगको बचन दिएका छन् । हामी पनि त्यसरी नै चलेका छौं ।
नगरपालिकाको सहयोग कस्तो रह्यो ?
बजेटबाट केही बिनियोजन भएको छ । निकासाका लागि वडाले सिफारिस पनि गरेका छन् । अब नगरपालिकालाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं खेल संयोजक टिका संग्रौलामार्फत । शायद अब केही गर्छ होला नगरले पनि ।
फाइनल खेलमा प्रतिष्पर्धा गर्दा गृह जिल्ला र नगरको साथ कतिको थियो ?
– बेलबारीको फुटबल क्लब र सैनिकबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा बेलबारीका मेयर आफ्नै क्लब हो भन्ने जसरी १२ वटा गाडीमा टनाटन मान्छे लिएर जानुभयो । बेलबारीकै खेल हो भनेजस्तो गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन । तर यहाँ त्यो हुन सकेन शायद इम्फर्मेसन कम भएर पनि हुन सक्छ । तर अब चै केही गर्नुहुन्छ होला ।
त्यति धेरै दर्शकले बेलबारीका पक्षमा हुटिङ गर्दा खेलाडीको मनोबल कस्तो रह्यो ?
शुरुमा त त्यस्तो केही भएन । तर जब बेलबारीले गोल लगाउँदा हुटिङ हुन्छ, हाम्राले लगाउँदा कोही कराउँदैन् । सैनिकबाट पनि मोटरसाइकलमा गेम हेर्न त गएका थिए । तर, त्यत्रोमा । पहिले त धरानका लोकल दर्शक हुन भन्ने लागेको थियो । पछि फर्केर हेर्दा त थाहा भयो सबै बेलबारीका रहेछन् । त्यतिबेला म कोच आफैंलाई पनि खल्लो भयो, खेलाडीलाई पनि खल्लो भयो । हाम्रो नगरपालिकाबाट पनि गाडीमा केही दर्शक लिएर जानु भएको भए हौसला एकदम राम्रो हुन्थ्यो । बेलबारीका मेयरले आफ्नै टिम जस्तो गरेर सबैलाई गाडीमा लिएर जानुभएको थाहा भयो, हामी त अभिभावक नै नभएको जस्तै महसुस भयो । सुरुमै ती दर्शक सबै बेलबारीकै हुन भन्ने थाहा भएको भए खेलाडी झन हतोत्साही हुन्थे । सुरुमा थाहा नभएर हाम्रा लागि ‘प्लस पोइन्ट’ भयो ।
यो गेमको महत्व ?
प्रतिष्ठित गेम हो । पहिलोपटक भएको खेल त्यसैपनि महत्वको छ । पहिलोपटक भएको गेममा साढे ४ किलोको चाँदीको कप जितेर ल्याएका छौं । त्यसैले पनि यो सैनिक युथ क्लब, विर्तामोड नगरपालिका र झापाकै लागि प्रतिष्ठाको विषय हो ।
राष्ट्रिय लिग खेल्न मानसिक रुपमा तयारी हुनुहुन्छ ? तयारीबारे केही ?
जिल्ला लिग खेल्ने योजना अनुरुप नै प्लानिङ गरेको थिए । त्यो अनुसार अघि बढ्दा जिल्लादेखि प्रदेश च्याम्पियनसम्मको यात्रामा प्लानिङ अनुसारका ७० देखि ८० प्रतिशत अघि बढेका छौं । अब बाँकी २० प्रतिशत छ । फुटबलको राजधानी मानिएको प्रदेश–१ मा च्याम्पियन भइरहँदा २० प्रतिशतमा बेनेफिट हो । प्रदेश–१ मा लिग भइसकेका कारण खेलाडी म्यानेज गराउन सजिलो भएको छ । त्यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय लिग खेल्न सक्छौं ।
राष्ट्रिय लिगका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
चुनौति नै त्यही हो । नगरपालिकादेखि संघसंस्था उद्योगी व्यवसायी र सहयोगीहरुसंग कुरा गरिरहेका छौं । स्पन्सरको प्रयास भइरहेको छ । लिगका लागि ६० देखि ८० लाखसम्म लाग्छ ।
खेल्ने र आर्थिक व्यवस्थापन दुवै जिम्मेवारी खेलाडी आफैंले लिंदा खेलको गुणस्तर कायम होला ?
–सबै खेलाडी जुनियर छन् । हामीले खेल्दा समस्या त्यही थियो । खेल्ने पनि आफैं, सहयोग जुटाउन पनि आफैं गर्नुपर्ने अवस्था थियो । २० औं वर्षसम्म म आफैं खेलाडी भएका नाताले ती कुरा बुझेको छु । खेलाडीलाई खेल्ने भन्दा अरु जिम्मेवारी दिएको छैन अहिले र दिनु पनि हँुदैन । क्लबको उपाध्यक्ष साथै कोच पनि भएका नाताले म्यानेजमेन्टमा क्लब खट्छ, दोहोरो जिम्मेवारीले खेलाडीको दिमागमा अरु कुनै पनि सानो कुरा आइदियो भने खेल्न सक्दैनन् । पफरमेन्स राम्रो हुन सक्दैन । पहिला हामी खेल्दा, खेलाडी र सहयोगी खोजेर खेल्यौ अब त्यस्तो हुुनुहुँदैन ।
मुख्यमन्त्री लिगको आलोचना पनि भयो ? तपाई चै के भन्नु हुन्छ ?
बर्षायाममा भयो भनेर ‘क्रिटिसाइज’ भयो । पहिलोपटक भएको हो । उहाँमा पनि यसबारे पूर्ण अनुभव नभएको हुनसक्छ । असार मसान्तसम्ममा प्रतियोगिता नसके रकम फ्रिज पनि हुँदो रहेछ । तर आगामी वर्ष यस्तो हुँदैन भनेर बचन दिनुभएको छ, हामी समयमा नै खेलाउँछौं भन्नु भएको छ ।
एक करोड ३३ लाख बजेट भएको टुर्नामेन्ट ज्यादै महत्वको हो । महत्व बोकेको प्रदेश कपको कुरा मिडियामा नआएको देख्दा लिग ओझेलमा परेको जस्तो लाग्या छ । प्रदेशस्तरको त यो ठूलो गेम हो । यसको प्रचार–प्रसार जरुरी देखेको छु ।
Previous articleजोशी र बुढाथोकी मृत फेला
Next articleप्रदेश च्याम्पियनलाई नगर र वडाको सम्मान
खेल व्यवसायिक खेलमा नगएसम्म फुटबलको भविष्य अन्योलमा